Igumbi elikhululekileyo kwimbali yaseKezmarok
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguLubomir
Ibekwe kufutshane nepaki yehlathi kwindawo ezolileyo, nangona isekufutshane neziko lembali laseKezmarok. Igumbi linegumbi lokuhlambela labucala kunye nekhitshi (ikhitshi ibekwe phezulu), indawo yokupaka ngaphakathi egadini kwaye, ngokuqinisekileyo, iWiFi.
Ukusuka apha ungafikelela ngokukhululekileyo uninzi lweendawo ezikufutshane- iintaba zeTatra eziPhezulu, ipaki ye-thermal Vrbov, umqolomba waseBelianska, inqaba eStrazky, iindlela zokuhamba ngebhayisekile kunye .. ewe iKezmarok ngokwayo! Wamkelekile ukuba usibuze nantoni na :)
4.63 ·Izimvo eziyi-17
4.63 · Izimvo eziyi-17
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi17
Imizuzu emi-5 yokuhamba iyakusa kwiindonga zenqaba kunye nenqaba ngokwayo; ukuba uziva ngathi unyuka induli encinci ujonge indlu uya kuvuzwa ngombono oqaqambileyo weTatras eziPhezulu; ukuba unebhayisekile, ungakonwabela uhambo olufutshane ukuya echibini iZlatna.
Umbuki zindwendwe ngu- Lubomir